Momba anay - Liaocheng Xinrun Import And Export Co., Ltd.
Tombanana dia 1998, Shandong Wei Run Industrial Manufacturing Co., Ltd. Any amin'ny faritra fampandrosoana ny toekarena Liaocheng, faritanin'i Shandong, dia mahatratra 68956 metatra toradroa sy velarana fananganana 39860 metatra toradroa. Miisa 327 ny mpiasa, ao anatin'izany ny mpiasa matihanina sy teknika mihoatra ny 52. Ny totalin'ny fananana dia 83 tapitrisa yuan ary ny vola miditra isan-taona dia 200 tapitrisa USD.
Ny varingarin-tsolika anay dia ampiasaina indrindra ho an'ny mpamaky entana, mpamily mpamily, sehatra fampiakarana, kamio fako, camion dump, trailer, harvester, ary milina fananganana maro. Afaka manao araka ny fitakianao sy ny sary.Ekeo OEM sy ODM.
Ny orinasanay dia mpanamboatra matihanina sy mpanondrana miahiahy amin'ny famolavolana, fampandrosoana ary famokarana varingarina teleskopika sy hydraulic. Ny toerana misy fitaovana tsara sy ny fifehezana kalitao tsara indrindra amin'ny dingana rehetra amin'ny famokarana dia ahafahanay manome antoka ny fahafaham-po ny mpanjifa.
Ny vokatray dia avy amin'ny fambolena ka hatramin'ny fiara sy ny indostria rehetra, ny vokatra dia natao hamaly ny fitakiana takian'ny mpanjifa. OEM sy ODM dia ekena. Ny tsipika famokarana dia novolavolaina satria takatsika ny filàna fahombiazan'ny matihanina sy ny faharetany.
izahay no mpamatsy lehibe ny indostrian'ny famokarana fiara an-toerana toy ny China Zhongqi, Shanxi Zhongqi, FAW, Hongta, Chongqing Changan, sns. Ny vokatray dia aondrana any Etazonia, Rosia, Polonina, Vietnam, Italia, Okraina, Romania, Aostralia, Kanada, Korea atsimo, Malezia ary firenena sy faritra hafa. ary eken'ny besinimaro amin'ny kalitao avo lenta.ary ny fahamendrehana. Ny orinasa dia nanangana rafitra serivisy ho an'ny mpampiasa tonga lafatra, manome fahafaham-po sy amin'ny serivisy mialoha, fivarotana ary serivisy aorian'ny fivarotana. Shandong Wei Run Industrial Manufacturing Co., Ltd. dia manantena fatratra ny hifanome tànana aminao, ary handroso miaraka amin'ny tombony sy ny fampandrosoana iraisana!
Raha liana amin'ny iray amin'ny vokatray ianao na te hiresaka momba ny lamina manokana, azafady mifandraisa aminay. Manantena ny hanana fifandraisana ara-barotra mahomby amin'ny mpanjifa vaovao manerantany isika ato ho ato.